Fitofana fanaparitahana, basy fanaparitahana foam, fanaparitahana paompy foam - Yongxiang
Ny vokatra avy amin'ny orinasanay dia ampiasaina betsaka amin'ny orinasa kosmetika lehibe sy orinasa pharmaceutika ao an-toerana.
Mino foana ny herin'ny fanaovana zavatra iray amin'ny fonay izahay, avelao i Yongxiang hamokatra Mihatsara izany.
Yongxiang tsy inly mivarotra prodycts, fa koa mihaino bebe kokoa ny customers'use experience.We miezaka ny hanao cutomers mivoatra amin'ny fiaraha-miasa sambatra.
Custom 28/400 28/410 28/415 Plastika PP Material...
On / Off Nozzle Ity Trigger Sprayer ity dia miaraka amin'ny zipo misy ribbed ho mora ahodinkodina amin'ny tanana malama sy fidirana mora amin'ny atiny ao anaty tavoahangy. Ho fanampin'izany, ity mpitsindroka trigger plastika fotsy fotsy ity dia misy nozzle On/Off eo amin'ny tendron'ny sprayer. Azonao atao ny manodina ny nozzle On/Off manaraka ny famantaranandro na mifanohitra amin'ny famantaranandro imbetsaka mba hanakatona ny fivoahana amin'ny sprayer. Rehefa eo amin'ny toerana tsy mety dia manakana ny sprayer amin'ny fivoahana tsy nahy ary mitazona ny trigger eo amin'ny toerana henjana ...
Industrial Soap Dispenser Pump Custom Plastic S ...
Famaritana Ireo paompy lotion ireo dia natao ho an'ny tavoahangy paompy fanosotra na dispenser ary misy loko isan-karazany. Izy ireo dia tonga lafatra ho an'ny fitaovana viscous, toy ny lotions, savony sy shampoos, ary koa ny fanafody, kosmetika, ary vokatra ara-pahasalamana sy hatsaran-tarehy hafa. Tonga lafatra ho an'ny fitaovana viscous 24/410 paompy mety tsy mety amin'ny vozony rehetra Mamoaka 2mL isaky ny famelezana Plunger mihidy ho an'ny fandefasana sy fitahirizana.
18/410 20/410 24/410 360 degre famafazana Nozzle Pe...
Ny tombony: 1. Manana fitaovana fanokafana bobongolo tena tsara izahay, ekipa ara-teknika manankarena, namorona andian-tsarimihetsika famolavolana, famolavolana tsindrona, fivoriambe tsy misy vovoka, fandidiana mandeha ho azy ho iray amin'ireo dingana famokarana. 2. Miaraka amin'ny milina fanodinkodinana 80 mahery, mahatratra iray tapitrisa ny fahafaha-mamokatra isan'andro ho an'ny sprayer zavona tsara. 3. Ny LOGO namboarina dia azo ekena, azo sokafana ny bobongolo araka ny fepetra takian'ny mpanjifa. 4.Certifites: SGS/ISO9001/FDA Ny polypropylène (PP) famafazana zavona tsara f...
Ningbo Yongxiang Plastics Industry Co., Ltd dia orinasa matihanina mirotsaka amin'ny famokarana sprayers plastika isan-karazany, plastika, electroplating vokatra sy ny horticultural vokatra, naorina tamin'ny 1992. Ny nodimbiasany dia Yuyao City Jin Chun Plastics Co., Ltd. Ny orinasa dia mirotsaka an-tsehatra tao amin'ny indostrian'ny plastika nandritra ny taona maro. Ny orinasanay dia mifanakaiky amin'ny tetezana malaza Hangzhou Bay sy Hangzhou Ningbo expressway, noho izany dia mety tsara ny fitaterana. Ny orinasanay dia manana departemanta R&D ..